Ungabafumana njani abaFaki abaDala kunye nabokwabelana noMxholo wakho | Martech Zone
Ungabafumana njani abaDali ukuba baYenze kwaye baBelane ngesiqulatho kuwe
NgoMvulo, Juni 9, 2014 NgeCawa, uJuni 8, 2014 Douglas Karr
Sabelane nje kanjani I-LinkedIn yayisebenzisa ukubalisa amabali kunye namabali omsebenzisi wokunyusa iinzame zentengiso yohlobo kunye neepops ezivela kwiNeil Patel- Ungabafumana njani abaDali ukuba baYenze kwaye baBelane ngesiqulatho kuwe. I-infographic ihamba kuzo zombini izibonelelo kunye nobungqina bezinto eziveliswe ngumsebenzisi (UGC).
Ayisiyi kuba ngumxholo owenziwe ngumsebenzisi kuphela oya konga imali, kodwa iya kukuvelisela ingeniso. Okukhona usenza ukuba abalandeli bakho bazibandakanye neshishini lakho, kokukhona uya kuzithemba ngakumbi, kwaye kokukhona kuya kubakho ukufikelela kwakho. Uyakubona izibonelelo ze-SEO. Ukukubonisa ukuba ungazibandakanya njani iindwendwe zakho ukuze ziqale ukudala nokwabelana ngomxholo wakho, iQuickprout ibeke i-infographic echaza inkqubo.
Nika izixhobo kwaye ufundise abalandeli bakho ukuba babhale njani, babelane ngemifanekiso kunye nevidiyo kunye nawe emva koko abasebenzi bakho banokuthi bagxile kulungelelwaniso, balungise ibali kakuhle, kwaye bavelise umxholo okhuthaza uphawu lwakho! Ngelixa inkqubo ifuna ukuvuselelwa kwenkqubo yentengiso yomxholo wakho, ekugqibeleni kukho ukonga (kunye nezinto ezininzi ezimangazayo) ekusebenziseni umxholo womsebenzisi ukukhupha igama!
tags: ugcUmxholo oveliswe ngumsebenzisiimifanekiso eyenziwe ngumsebenzisiyenziwe ngumsebenzisiIvidiyo eyenziwe ngumsebenzisi